ओलीलाई सर्वोच्चको झट्का, माधब नेपाल खुसिले गदगद — Imandarmedia.com
ओलीलाई सर्वोच्चको झट्का, माधब नेपाल खुसिले गदगद
काठमाडौ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका संम्धीलाई सर्वोच्च अदालतले सांसद पद जोगाइदिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीमा जान चाहेका एमाले सांसद तथा नेपालका सम्धी सोमप्रसाद पाण्डेको पद जोगाइदिएको हो ।
उनीसँग राष्ट्रिय सभाकी सांसद शारदा भट्टको पद पनि जागिएको छ । अदालतले उनीहरुलाई कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सांसद पाण्डे र भट्टले आफूहरु एकीकृत समाजवादीमा जान चाहेको तर निर्वाचन आयोगले सनाखत गर्न नमानेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले आयोगसहितका विपक्षीलाई भदौ २९ गते छलफलमा बोलाएको छ । भदौ २९ गतेसम्म सांसद पाण्डे र भट्टलाई सांसद पदबाट कारबाही नगर्न पनि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ताका क्रममा केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरुको हस्ताक्षर सनाखत गर्ने क्रममा सांसद पाण्डे र भट्ट पनि निर्वाचन आयोग पुगेका थिए ।
तर निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका क्रममा दिएको निवेदनमा उनीहरुको नाम नभएको भन्दै सनाखत गर्न अस्वीकार गरेको छ । यो आदेशले पाण्डेलाई मन्त्री बन्ने बाटो पनि खोलिदिएको छ । माधव नेपालको कोटाबाट उनी मन्त्री बन्ने पक्का छ ।
यसै गरि , नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफू अब एक्लिदै जाने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन। पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष दाहालले चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीका नेता माओले जीवनको अन्तिम कालमा एक्लिएको दृष्टान्ट पेश गर्दै आफूलाई पनि कहिलेकाँही १/२ वर्षपछि यस्तै हुने होकि भन्ने चिन्ता लाग्ने गरेको बताए।
आईतबार काठमाडौंमा आयोजित ‘नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको कार्यदिशा’ नामक पुस्तकको बिमोचन कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफ्नो दिमागमा कहिलेकाँही त्यस्तो खालको चिन्तन आउने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसबारे चिन्तनमनन गरी दिन पनि बाम बुद्धिजीविहरुलाई आग्रह गरे।
उनले भने, ‘कहिलेकाँही म पनि यस्तै हुँदो रहेछ। १/२ वर्ष जतिमा एक्लो पो हुने हो कि? र माओले भनेजस्तै ‘म एक्लो हुँ’ भन्नुपर्ने हो कि? कहिलेकाँही यस्तो चित्र पनि मेरो दिमागमा आउँछ के। तपाईहरु यो पनि चिन्तनमनन गरिदिनुहोला। नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको कार्यदिशामा सन्दर्भमा यो रोग के हो? पुस्तकका टिप्पणीकारहरुले प्रचण्डको नाम आउँछ कि भनेर किन डराउनु भयो? यो व्यक्तिगत कुरा हो र? व्यक्तिगत प्रशंशा खोजेको कुरो हो र? यो।’
अध्यक्ष दाहालले केपी ओलीप्रति संकेत गर्दै पुस्तकमा नहुनुपर्ने मान्छेको सन्दर्भमा धेरै लेखिएको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे।उनले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको कार्यदिशालाई सही ढंगले अघि बढाउन विगतमा भएका ईतिहासहरुको सही समिक्षा गरेर अघि बढनुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याए। अध्यक्ष दाहालले आफूले अझै कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकतावद्ध गरेर अघि बढन चाहेको पनि पटकपटक दोहोर्याए।
यसै गरि ,सत्ताधारी दल दल नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री उदयशमशेर जबराले एमसीसीलाई पास गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले एमसीसी पािरत गराउन संसद्भित्र र संसद् बाहिर रहेका सबै दलबीच सहमति गराउनुपर्ने पनि बताए। एमसीसी पास गर्दा नेपालको विकासलाई सहयोग पुग्ने उनको धारणा छ।
आएतबा रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने,‘अहिले एमसीसीलाई हेर्ने दृष्टिकोण खासमा आर्थिक, सामाजिक अथवा राजनीतिक पक्षभन्दापनि यो पोलिटिकल टुल भएको छ। एमसीसी २०१७ को सेप्टेम्बरमा सम्झौता भएको हो। यसमा सबै दलको संलग्नता छ। सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको एक वर्षपछि यो विवाद सुरु भयो।
एमसीसीको डकुमेन्ट एक वर्षपछि विवाद सुरु किन भयो? एमसीसीको विवाद सुरु हुनुअघि नेकपाभित्र विभिन्न पक्ष र विवाद सुरु भयो। एमसीसी नेकपाभित्रको विवादको शिकार भयो। अर्को कुरा, एमसीसीबारे नेताहरुले बुझाउन पनि नसकेको हो। यो कमजोरी हाम्रो पनि हो।’
उनले एमसीसी सहयोग लगभग ५० वटा देशले लिएको भन्दै तीमध्ये हाम्रो देशकोजस्तै भूगोल भएको मंगोलियाले दुई पटक सहयोग लिएको स्मरण गराए। उनले भने,‘एमसीसीको सहयोग लिँदा चीन रिसाउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन्। चीन रिसाउने भएको भए मंगोलियाले लिँदा पनि लिन्थ्यो होला नि। श्रीलंकाले एमसीसी फिर्ता गरेको हो। तर, एमसीसी होईन श्रीलंकामा परियोजना नै विवादमा थियो।
नेपालमा प्रोजेक्ट विवादमा छैन्। यो हाम्रो आवश्यकत्ता हो।’ नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डा.राजन भट्टराईले पार्टीले एमसीसीबारे अहिले कुनै धारणा नबनाएको बताएका छन। आईतवार रिपोर्टर्स क्लव नेपालमा भएको कार्यक्रममा विभाग प्रमुख भट्टराईले सत्तासीन दलहरुले धारणा बनाएपछि मात्रै नेकपा एमालेको धारणा बनाउने बताएका हुन।
उनले एमसीसीबारे सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने बारेमा नेकपा एमाले बेखबर रहेको बताए। डा. भट्टराईले एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार अमेरिकाबाट आउनुभएको र त्यसमा सरकारको तर्फबाट के सन्देश दिइयो भन्ने बारेमा आधिकारीक रुपमा आफ्नो पार्टी बेखबर रहेको बताए।
विभाग प्रमुख डा. भट्टराईले भने, ‘एमसीसीबारे सरकारले के गर्दैछ? हाम्रो प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले बेखबर छ, एमसीसीको उपाध्यक्ष अमेरिकाबाट नआउनुभएको थियो, उहाँसँग के कुरा भयो? के भन्यो ? सरकारको तर्फबाट के सन्देश दिइयो त्यो थाहा छैन, हिजो एमसीसीका बारेमा एउटा धारणा भएका दलहरु, नेताहरु अहिले सत्तासीन गठबन्धनमा छन्, उनीहरुको धारणा फेरियो वा उही छ, त्यो थाहा छैन,।
उनीहरुका बीचमा के छलफल भइरहेको छ, सत्तासीन पार्टीहरुका बीचमा के भइरहेको छ ? हामी औपचारिक रुपमा बेखबर छौँ, पत्रपत्रिका र मिडियामा मात्र आएका सूचनालाई आधार बनाएर हामीले धारणा बनाउँदैनौँ, हाम्रो भूमिका प्रतिपक्षको हो।’
उनले नेकपा एमाले भित्र नेतृत्वमा आएको विवाद पछि मात्रै एमसीसीको विवाद शुरु भएको स्मरण गराए। पूर्वमन्त्री जबराले एमसीसीको पैसा नआएपनि नेपालको अर्थतन्त्र अघि बढिरहने तर सित्तैमा दिएकोरकम लिन्न भन्नु उचित नहुने बताए।
पूर्वमन्त्री जबराले भने, ‘अहिले एमसीसीलाई हेर्ने दृष्टिकोण खासमा आर्थिक, सामाजि र राजनीतिक पक्षभन्दा पनि यो पोलिटिकल टूल भएको छ, एमसीसी २०१७ को सेप्टेम्बरमा सम्झौता भएको हो,।
यसमा सबै दलको संलग्नता छ, सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको एक वर्षपछि यसको विवाद शुरु भयो, एमसीसीको डकुमेण्ट एक वर्षपछि विवाद किन शुरु भयो भन्दा नेकपा एमालेको नेतृत्वको विवाद शुरु भएपछि हो, एमसीसी नेकपाको विवादको एउटा शिकार भयो, एमसीसी पास गर्दा देशलाई फाइदा नै हुन्छ, यो ग्रान्ट हो कि लोन? एमसीसी ग्रान्ट हो, यो सडक र प्रशारण लाइनमा पर्छ, यसले नेपाललाई फाइनै गराउँछ।’
पूर्वाधारविद् डा.आचार्यले भने,‘एमसीसी अहिले जस्तो छ त्यस्तै रुपमा पास गर्नुहुँदैन भन्ने मेरो कुरा हो, यो म कुनै नेताको विचार सुनेर, एजेण्डा हरेर भनेको होइन, मसँग वस्तुगत आधार छन्, दर्जनौँ डकुमेण्टहरु छन्, त्यसको सूचनाहरु छन्,।
जुन कुरा नेताहरु जनतासामु चुहाउन चाहँदैनन्, अड्कलि अड्कलि सूचना दिन्छन्, देशलाई नेपालका दुई ठूला राजनीतिक दलहरुले ठूलो अन्याय गरेका छन्, एउटा एमसीसीको उत्थान जसरी गरियो, गर्न प्रेरित गरियो र अर्को सहस् गर्न र गराउने वातावरण मिलाइयो, त्यसमा लापरवाही भएको छ, सम्झौता वार्तामा पनि लापरवाही भएको छ।’
पूर्वाधारविद् डा.आचार्यले एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेपाल आएर शीर्ष नेताहरुलाई भेट्दा नेताहरुले आफ्नो देशको आन्तरिक राजनीतिका पाटोहरुलाई खुलाउनु नहुने बताए। उनले अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देशले सहयोग गर्ने कुरा बिना कुनै स्वार्थ हुन नसक्ने पनि बताए।